ကိုယ်ဝန်ရှိရင် (၂) ယောက်စာ စားရတယ်ဆိုတာ တကယ်လား? - For her Myanmar
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် အစာအာဟာရပြည့်ပြည့်စုံစုံစားပေးရမှာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို (၂) ယောက်စာအထိ စားပေးရမယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်က အရင်ထက် ပိုတိုးလာပါတယ်။ ဒီတိုးလာတဲ့ပမာဏကို ပြည့်မီအောင်တော့ စားသုံးပေးရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အများစုကတော့ ဒီလို အာဟာရ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီစေဖို့ အစားအသောက်တွေအပြင် တခြားအားဆေးတွေကိုပါ မှီဝဲကြလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တောင် မဆောင်ရသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း သောက်ကြတယ်။ ဒီအားဆေးတွေက မွေးလာမယ့် ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီအားဆေးတွေက ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကရော ဘာတွေလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဗီတာမင်အားဆေးတွေဆိုတာ ဆရာဝန်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မှာ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရပြီဆိုတာနဲ့ မိခင်လောင်းတွေရဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်က တိုးလာပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီလို လစ်ဟာသွားတဲ့ လိုအပ်ချက်နေရာကို ပုံမှန်စားသောက်ရုံနဲ့ မပြည့်နိုင်တာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေက ဒီလစ်ဟာနေတဲ့ နေရာကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားသင့်တာက ဒါတွေက အားဆေးသီးသန့်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုတော့ အစားထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရိုးရိုး ဗီတာမင်ဆေးပြားတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေနဲ့ ဘာကွာသလဲ?
အဓိကအားဖြင့်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးတွေမှာ အောက်ပါ အာဟာရဓာတ် (၃) မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် – ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်နေ့ကို ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်လောက် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးအများစုမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ ဂရမ်လောက် ပါဝင်နေပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာလည်း ပါဝင်ဦးမှာမို့ ဒီပမာဏက လုံလောက်မှု ရှိမှာပါ။ ကယ်လ်ဆီယမ်က အရိုးတွေ သန်မာဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်စစ် – ဖောလစ်အက်စစ် သောက်သုံးခြင်းက မွေးလာမယ့် ကလေးငယ်မှာ ကျောရိုး၊ အာရုံကြောမကြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ဖောလစ်အက်စစ် ၆၀၀ မီလီဂရမ်လောက် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစားအသောက် တစ်မျိုးတည်းကနေပဲ ဖောလစ်အက်စစ်ကို လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့ မလွယ်တာမို့ အားဆေးအနေနဲ့ သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာထဲကဆိုရင်တော့ ပဲ၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကညွတ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတဲ့ အစားအစာတွေမှာ ပါဝင်ပြီး ကွေကာအုတ်၊ ဂျုံကြမ်းနဲ့ ပါစတာလို အစားအစာတွေထဲမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဖောလစ်အက်စစ်က မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာကြောင့် ကလေးယူဖို့စပြီး စဉ်းစားကတည်းက သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
သံဓာတ် – ခန္ဓာကိုယ်က သွေးနီဥတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက် သံဓာတ် လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သွေးအားပြည့်နေဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် သံဓာတ်က မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့ကို သံဓာတ် ၂၇ မီလီဂရမ်လောက် လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကတော့ အိုမီဂါ ၃ အက်စစ်၊ ဇင့်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် E,A, C စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မဖြစ်မနေ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အလှကုန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဘယ်အချိန်မှာ ဗီတာမင်အားဆေးတွေ စသောက်သုံးမလဲ?
ဒီဆေးတွေ မသောက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အမြွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူတွေ၊ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူတွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆို တခြားသူတွေထက် ပိုပြီး ဗီတာမင် လိုအပ်ချက် ပိုများပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေက အားဆေးတွေ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီး နို့တိုက်မိခင်တွေကိုလည်း အားဆေးတွေ ဆက်သောက်ဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နို့တိုက်ကျွေးရာမှာလည်း မိခင်တွေအနေနဲ့ အာဟာရဓာတ် အင်မတန် လိုအပ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကရော ဘာတွေလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေက ကိုယ်ဝန်လက်ရှိလွယ်ထားရသူတွေနဲ့ နို့တိုက်နေသူတွေပဲ သောက်သုံးတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်လို ဓာတ်တွေ အရမ်းများသွားရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ ချို့တဲ့မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်အရမ်းများသွားရင်လည်း မိန်းကလေးတွေမှာ ဝမ်းချုပ်တာ၊ မူးဝေအော့အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် အေ ကလည်း လိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပါပဲ။ လိုတာထက် ပိုမှီဝဲမိသွားရင် အသည်းကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေပါတယ်။
နောက်ပြီး အမျိုးသမီး တချို့ လွဲမှားစွာ ယူဆကြတဲ့ တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေ သောက်သုံးရင် ဆံပင်တွေ နက်မှောင်သန်စွမ်းတယ်၊ အသားရေလှမယ်၊ လက်သည်းခြေသည်းတွေလည်း ပိုတောက်ပြောင်လာတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးလေ့လာချက်တွေအရတော့ ဒါတွေက အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့ အလှအပရေးရာအတွက် ဒီအားဆေးတွေက သိသိသာသာ မကူညီပေးနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အားလုံး အတိုချုံးပြန်ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆို အစာအာဟာရ ပြည့်ပြည့်ဝဝစားသုံးဖို့ အရင်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ အသားဟင်းငါးဟင်း၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့၊ ဂျုံကြမ်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေ အများကြီး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ ဗိုက်အပ်ပေးပါ။ ဒီတော့မှ ဆရာဝန်က မိခင်လောင်းနဲ့ သင့်တော်မယ့် ဆေးတွေကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အာဟာရဓာတ် လိုအပ်ပုံချင်းမတူတဲ့အတွက် ပေးတဲ့အားဆေးလည်း တူညီမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးကိုလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်းသောက်မယ်၊ အစားအသောက်လည်း စည်းကမ်းရှိမယ်ဆိုရင် မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တခြို့လူတှကေထငျကွပါတယျ၊ ကိုယျဝနျရှိသှားပွီဆိုတော့ မိခငျအတှကျရော ကလေးအတှကျပါ (၂) ဆ စားပေးရမယျလို့။ ဒါက တကယျရောမှနျပါရဲ့လား။
ကိုယျဝနျရှိနရေငျ အစာအာဟာရပွညျ့ပွညျ့စုံစုံစားပေးရမှာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အပျေါမှာပွောခဲ့သလို (၂) ယောကျစာအထိ စားပေးရမယျဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ သို့ပမေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ မိခငျဖွဈသူရဲ့ တဈနတေ့ာ စှမျးအငျလိုအပျခကျြက အရငျထကျ ပိုတိုးလာပါတယျ။ ဒီတိုးလာတဲ့ပမာဏကို ပွညျ့မီအောငျတော့ စားသုံးပေးရပါမယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ အမြားစုကတော့ ဒီလို အာဟာရ လိုအပျခကျြကို ပွညျ့မီစဖေို့ အစားအသောကျတှအေပွငျ တခွားအားဆေးတှကေိုပါ မှီဝဲကွလရှေိ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျတောငျ မဆောငျရသေးတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျး သောကျကွတယျ။ ဒီအားဆေးတှကေ မှေးလာမယျ့ ကလေးရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာ ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါဆို ဒီအားဆေးတှကေ ဘာတှလေဲ၊ သူတို့ရဲ့ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးတှကေရော ဘာတှလေဲ?
ကိုယျဝနျဆောငျ ဗီတာမငျအားဆေးတှဆေိုတာ ဆရာဝနျရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြမလိုအပျဘဲ အပွငျမှာ လှယျလငျ့တကူ ဝယျယူသောကျသုံးနိုငျတဲ့ ဆေးဝါးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျရပွီဆိုတာနဲ့ မိခငျလောငျးတှရေဲ့ စှမျးအငျလိုအပျခကျြက တိုးလာပါတယျ။ တဈခါတလေ ဒီလို လဈဟာသှားတဲ့ လိုအပျခကျြနရောကို ပုံမှနျစားသောကျရုံနဲ့ မပွညျ့နိုငျတာ ရှိပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးတှကေ ဒီလဈဟာနတေဲ့ နရောကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ ရညျရှယျပါတယျ။ တဈခုမှတျထားသငျ့တာက ဒါတှကေ အားဆေးသီးသနျ့ပါပဲ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှကေိုတော့ အစားထိုးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ရိုးရိုး ဗီတာမငျဆေးပွားတှနေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးတှနေဲ့ ဘာကှာသလဲ?
အဓိကအားဖွငျ့တော့ ကိုယျဝနျဆောငျ အားဆေးတှမှော အောကျပါ အာဟာရဓာတျ (၃) မြိုး ပါဝငျပါတယျ။
ကယျလျဆီယမျဓာတျ – ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ အရှယျရောကျ အမြိုးသမီးတှဟော တဈနကေို့ ကယျလျဆီယမျဓာတျ ၁၀၀၀ မီလီဂရမျလောကျ လိုအပျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ အားဆေးအမြားစုမှာ ကယျလျဆီယမျဓာတျ ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ ဂရမျလောကျ ပါဝငျနပေါတယျ။ နစေ့ဉျစားသောကျနတေဲ့ အစားအသောကျထဲမှာလညျး ပါဝငျဦးမှာမို့ ဒီပမာဏက လုံလောကျမှု ရှိမှာပါ။ ကယျလျဆီယမျက အရိုးတှေ သနျမာဖို့အတှကျ လိုအပျပါတယျ။
ဖောလဈအကျစဈ – ဖောလဈအကျစဈ သောကျသုံးခွငျးက မှေးလာမယျ့ ကလေးငယျမှာ ကြောရိုး၊ အာရုံကွောမကွီး ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈခွငျးကနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှအေနနေဲ့ တဈနကေို့ ဖောလဈအကျစဈ ၆၀၀ မီလီဂရမျလောကျ လိုအပျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အစားအသောကျ တဈမြိုးတညျးကနပေဲ ဖောလဈအကျစဈကို လုံလုံလောကျလောကျရရှိဖို့ မလှယျတာမို့ အားဆေးအနနေဲ့ သောကျသုံးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အစားအစာထဲကဆိုရငျတော့ ပဲ၊ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ ကညှတျ၊ ပနျးဂျေါဖီစိမျး စတဲ့ အစားအစာတှမှော ပါဝငျပွီး ကှကောအုတျ၊ ဂြုံကွမျးနဲ့ ပါစတာလို အစားအစာတှထေဲမှာလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ကလေးငယျရဲ့ အစောပိုငျးဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ ဖောလဈအကျစဈက မရှိမဖွဈ လိုအပျတာကွောငျ့ ကလေးယူဖို့စပွီး စဉျးစားကတညျးက သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
သံဓာတျ – ခန်ဓာကိုယျက သှေးနီဥတှတေိုးပှားလာဖို့အတှကျ သံဓာတျ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျက သှေးအားပွညျ့နဖေို့ လိုအပျတာကွောငျ့ သံဓာတျက မရှိမဖွဈပါပဲ။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ တဈနကေို့ သံဓာတျ ၂၇ မီလီဂရမျလောကျ လိုအပျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျတှအေနနေဲ့ တခွားလိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှကေတော့ အိုမီဂါ ၃ အကျစဈ၊ ဇငျ့ဓာတျ၊ ဗီတာမငျ E,A, C စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျဝနျဆောငျတှေ မဖွဈမနေ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့ အလှကုနျပါဝငျပစ်စညျးမြား
ဘယျအခြိနျမှာ ဗီတာမငျအားဆေးတှေ စသောကျသုံးမလဲ?
ဒီဆေးတှေ မသောကျခငျ ဆရာဝနျနဲ့ အရငျတိုငျပငျဖို့လိုအပျပါတယျ။
အမွှာကိုယျဝနျဆောငျထားသူတှေ၊ အသကျငယျငယျနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျထားသူတှေ၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲဖူးတဲ့ အမြိုးသမီးတှဆေို တခွားသူတှထေကျ ပိုပွီး ဗီတာမငျ လိုအပျခကျြ ပိုမြားပါတယျ။ ဒီအမြိုးသမီးတှကေ အားဆေးတှေ ပိုလိုအပျပါတယျ။
ကလေးမှေးပွီး နို့တိုကျမိခငျတှကေိုလညျး အားဆေးတှေ ဆကျသောကျဖို့ တိုကျတှနျးလေ့ ရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နို့တိုကျကြှေးရာမှာလညျး မိခငျတှအေနနေဲ့ အာဟာရဓာတျ အငျမတနျ လိုအပျလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးတှကေရော ဘာတှလေဲ?
ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးတှကေ ကိုယျဝနျလကျရှိလှယျထားရသူတှနေဲ့ နို့တိုကျနသေူတှပေဲ သောကျသုံးတာ ပိုသငျ့တျောပါတယျ။ ဖောလဈအကျစဈလို ဓာတျတှေ အရမျးမြားသှားရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဗီတာမငျ ဘီ ၁၂ ခြို့တဲ့မှုတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ သံဓာတျအရမျးမြားသှားရငျလညျး မိနျးကလေးတှမှော ဝမျးခြုပျတာ၊ မူးဝအေော့အနျတာ၊ ဝမျးလြှောတာတှအေထိ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ အေ ကလညျး လိုအပျတယျဆိုပမေဲ့ အတိုငျးအတာတဈခုအထိပါပဲ။ လိုတာထကျ ပိုမှီဝဲမိသှားရငျ အသညျးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျစပေါတယျ။
နောကျပွီး အမြိုးသမီး တခြို့ လှဲမှားစှာ ယူဆကွတဲ့ တဈခကျြ ရှိပါသေးတယျ။ ဒီလို ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးတှေ သောကျသုံးရငျ ဆံပငျတှေ နကျမှောငျသနျစှမျးတယျ၊ အသားရလှေမယျ၊ လကျသညျးခွသေညျးတှလေညျး ပိုတောကျပွောငျလာတယျလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ အခုနောကျဆုံးလလေ့ာခကျြတှအေရတော့ ဒါတှကေ အမှနျမဟုတျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ အမြိုးသမီးရဲ့ အလှအပရေးရာအတှကျ ဒီအားဆေးတှကေ သိသိသာသာ မကူညီပေးနိုငျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အားလုံး အတိုခြုံးပွနျပွောရရငျတော့ ကိုယျဝနျရှိနတေဲ့ ဒါမှမဟုတျ မိခငျနို့ တိုကျကြှေးနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဆို အစာအာဟာရ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝစားသုံးဖို့ အရငျအာရုံစိုကျသငျ့ပါတယျ။ အသားဟငျးငါးဟငျး၊ အဆီထုတျထားတဲ့ နှားနို့၊ ဂြုံကွမျး၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ သဈသီးဝလံတှေ အမြားကွီး စားသုံးနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး ကိုယျဝနျရှိပွီဆိုတာနဲ့ သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျနဲ့ ဗိုကျအပျပေးပါ။ ဒီတော့မှ ဆရာဝနျက မိခငျလောငျးနဲ့ သငျ့တျောမယျ့ ဆေးတှကေို ညှနျကွားပါလိမျ့မယျ။ လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အာဟာရဓာတျ လိုအပျပုံခငျြးမတူတဲ့အတှကျ ပေးတဲ့အားဆေးလညျး တူညီမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဆေးကိုလညျး သတျမှတျထားတဲ့ ပမာဏအတိုငျးသောကျမယျ၊ အစားအသောကျလညျး စညျးကမျးရှိမယျဆိုရငျ မိခငျရော ကလေးပါ ကနျြးမာတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရရှိနိုငျမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျအပျပါတယျခငျဗြာ။
Tags: double, Eat, Health, Pregnant, Supplement, Vitamin
For Her Myanmar November 28, 2018